Forum serasera malagasy VAOVAO MATV 26 JANVIER 2012 - Dinika forum.serasera.org
VAOVAO MATV 26 JANVIER 2012
Lohahevitra : Hoy ny gazety
Fitohizan'ny hafatra : VAOVAO MATV 26 JANVIER 2012
rijadolly - 27/01/2012 17:33
Androany no nigadona teto Madagasikara ny andiany faharoa amin'ny delegasionina izay niatrika ny fivoriana tany Pretoria Afrika Atsimo.
Nihaona taminny mpanao gazety tetsy aminny lapam-panjakana Ambohitsorohitra i Norbert Lala Ratsirahonana izay nitarika ny delegasionan'ny fiadidian'ny fahefanana avon'ny tetezamita tany Pretoria.
Naneho hevitra mikasika ny raharaham-pirenena ny ministry ny Asam-panjakana, ny asa ary ny lalana sosialy, Tabera Randriamanantsoa.
Manoloana ny fihitsohan'ny toe-draharaham-pirenena noho ny fitavozavozana eo amin'ny fandraisan'andraikitr'ireo mpanao politika, dia nisintona ny lakolosy ny komity miaro ny demokrasia sy ny tolom-bahoaka.
Androany no nanombohan'ny dinik'asa mikasika ny fitondrana tsara tantana. Nosoritan'ny praiminisitra lehiben'ny governemanta Omer Beriziky fa misy ny lesoka amin'ny fampandehanana ny raharaham-panjakana.
26 janoary 2009- 26 janoary 2012, feno telo taona katroka androany ilay alatsinainy mainty izay nisehoan'ny fandrobana ireo toeram-pivarotana maro teto amin'ny firenena.
Telo taona katroka taorian'ny nahamay ny Trading Center etsy Analakely, dia nivory teo anoloan'ity toeram-pivarotana manan-tantara ity indray ireo olona nitana toeram-pivarotana tao.
Nanatanteraka ny fila-kevim-pirenena ny Sendikan'ny mpampianatra mpitsara (Seces) io tapak'andro maraina io.
Amin'ity taona ity dia manamarika ny faha-59 taona nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny olona mararin'ny habokana izao tontolo izao.
Vao telo volana monja no nanaovana ny fanentanana ny vahoaka mba hanatona ny tomponandraikitra raha misy ny herisetra mianjady aminy, dia tsikarika fa niakatra ny salan'isan'ireo olona niroso tamin'izany.
Eo amin'ny sehatra sosialy sy fampandrosoana ny tontolo manodidina no tena iompanan'ny andraikitra sahanin'ny fikambanam-behivavy Association Accueil Madagascar na ny AAM.
Fotoana fambolen-kazo izao. Toy efa fanaony isan-taona dia tonga teny Ambatomirahavavy ny mpiasan'ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy na ny Cnaps nanao izay fambolen-kazo izay.
Notanterahana teny amin'ny FJKM Andravoahangy Fivavahana androany ny fihaonamben'ny isam-pitandremana manerana ny synodam-paritany Iarivo Avarandrano.
Hivoaka manomboka rahampitso ny laharana 345 aminny gazety Ma-HERY ahitantsika ireo karazana lahatsoratra mahaliana antsika lehilahy.
Page rendered in 2.0048 seconds